ဂျာနယ် Notebook | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-bestbusinessprinting.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ဂျာနယ် Notebook ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ပုံစံ - 12-3
စက္ကူ:coated အနုပညာစက္ကူ mounting ဘုတ်အဖွဲ့/စာမကျြနှာ simili စက္ကူအတွင်းအပြင်
Finish:လက်ျာဘက်၌ PP အပေါ်ယံပိုင်း(ဆိုရင်တော့ Matte) /နှစ်ဆဝါယာကြိုး binding/ကပ်ညှပ်ဖြတ်တောက်သေဆုံး/ဖွဲ့စည်း
binding ဝါယာကြိုးများ၏ချောထုတ်ကုန်မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာဘုံဖြစ်ပါသည်,စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများ,စားပွဲခုံပြက္ခဒိန်သို့မဟုတ်ကတ်တလောက်,စသည်တို့ကို.အဆိုပါ binding နည်းလမ်းကိုအခြေခံအားဖြင့်နှစ်ပိုင်းခွဲခြား:လိမ်စည်းနှောင်ကွိုင်နှင့်စက္ကူ.ဒါဟာစာမျက်နှာစာရငျးစာမျက်နှာအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့် binding ဖြည့်စွက်ဖို့အထက်ကွိုင်ရှုပ်နေခဲ့သည်;အဆိုပါကွိုင်သတ္တုလိမ် binding ကွိုင်နှင့်ပလပ်စတစ်လိမ် binding ကွိုင်သို့ကွဲပြား;ထူနှင့်အချင်းမတူကြ;အဆိုပါလာကြတယ်လည်းနှစ်ခုပတ်ပတ်လည်တွင်းမျိုးစုံနှင့်စတုရန်းပေါက်တွေရှိပါတယ်.
Hardcover ထုံးစံမှတ်စုစာအုပ်,ကုမ္ပဏီများကပိုပြီးပိုမိုစုံလင်လာဝယ်ယူမှုရွေးချယ်စရာရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြု,ထုံးစံဓလေ့-သင့်ကုမ္ပဏီမှထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းဖန်ဆင်း hardcover မှတ်စုစာအုပ်'s ကိုကော်ပိုရိတ်ပုံရိပ်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 http://www.bestbusinessprinting.com/my/journal-notebook.html
ဂျာနယ် Notebook ထုတ်လုပ်သူနှင့် ဂျာနယ် Notebook ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 72,973 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ bestbusinessprinting.com